याँ शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११, १२ सम्म कक्षा संञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ :भगिश्वर योङहाङ « Phidim Today
याँ शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११, १२ सम्म कक्षा संञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ :भगिश्वर योङहाङ
Published on: 27 May, 2019 1:10 am
पाँचथरको हिलिहाङ ४ मा रहेको सिद्धदेवी माबिकी छात्रा शितल योङहाङको हत्या भएको करिव दुई साता बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाएको अवस्था छैन । फरार एक अझै फरार छन । यही सेरोफेरोमा रहेर पत्रकार जितेन्द्र भण्डारीले बिद्यालयका प्रधानाध्यापक भगिश्वर योङहाङसंग गरेको कुराकानी आजको टुडे संवादमा ।
छात्रा शितलको हत्या भयो । अहिले बिद्यालयको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो एक विद्यार्थी शितल योङहाङ हाम्रो विद्यालयमा पढेर दिउसो घर फर्केकी थिईन । उनलाई रातको ७ बजे तिर मृत अबस्थामा फेला परियो । यस्तो अबस्थामा भेटिँदा हाम्रो विद्यालय एकदमै दुःखी भएको छ । हाम्रो विद्यालयकमा एकै परिवार भएर पढने विद्यार्थीको यस्तो अवस्थामा भेटिएको थियो । हत्यमा संलग्न एक जना पक्रउ पनि परेका छन । मुख्य अभियुक्त भने अहिले सम्म भेटिएको छैन । हामी चाँडो भन्दा चाँडो अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कार्वाही गर्नु पर्ने माग गर्दछौँ । यसका लागि हामीले पटक पटक प्रशासनको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौँ ।
महायज्ञकाबाट के सहयोग भयो बिद्यालयलाई ?
हामीले यो महायज्ञ पृर्ण सफलत भएको मानेका छौ । हामीले जुन रुपले सोचेका थियौ र हामीले जति रहकमको अपेक्षा रहखेका थियौ त्यो भन्दा धेरै नै उपलब्धी भएको छ । शिक्षासेबी ब्यक्तिहरुले पनि सहानुभुती देखाउनु भएको छ । हाम्रो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुका अविभावकहरुले पनि सहयोग गर्नु भएको छ । तथा हामीलाई बाहिर जाँने विद्यार्थीहरुले पनि हामिलाई विभिन्न सहयोग गर्नु भएको छ ।
आयब्यय कहिले सार्वजानीक हुन्छ ?
यो कुरालाई हामीले स्वीकानु पर्छ किनभने हामीले चाँहादा चहादै पनि पनि सर्वजनिक गर्न सकिरहेको छैनौ । उत्घाटन कार्यक्रममा पनि हामीले भनेको हो हामी १० दिन १५ दिनभित्रमा सर्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका छाँै तर विभिन्न समस्याको कारणले गर्दा संभव भएको छैन । अबको केही दिनमा हामी सर्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका छांै ।
हाम्रो ठाँउमा भएका स्थानियबासीहरुले मात्रदान गर्नु हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको थियौ । आफुले सक्ने सहयोग गर्नुभयो । हामीले थोरै रकम मात्र संकलन हुन्छ भन्ने सोचेका थियौ तर हामीले सोचेको भन्दा धेरै मात्रमा रहकम जम्मा भएको छ ।
लक्ष्य अनुसारको काम कहिले बाटकाम सुरु गर्नु हुन्छ ?
हामी काम गर्न केही पछि परेका छांै । केही दिनमा नै हामी हाम्रो काम सुरु गर्ने योजनामा रहेका छांै । हामी संभव भए सम्म नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११, १२ सम्म कक्षा संञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ ।